सभापति देउवा र डा. शेखरबीच बोलचाल नै बन्द - Jhilko
सभापति देउवा र डा. शेखरबीच बोलचाल नै बन्द
काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा बढी नबोल्न दिएको निर्देशनलाई नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, युवा नेता गगन थापा लगायतले शीरोधार्य गरेका छन् । तर डा. शेखर कोइराला भने सभापति देउवाले राणा शासकको जस्तो शैली अवलम्वन गरेको भन्दै आक्रोस प्रकट गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समयमा सभापति देउवा र सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका डा. शेखर कोइरालाबीच वाकयुद्ध नै चलेको छ । जागरण अभियानका सिलसिलामा डा. कोइराला जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ उनले सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति आक्रोस व्याक्त गर्न छुटाएका छैनन् । सभापति देउवाले दुई महिनाअघि वीरगञ्जमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै ‘नेपाली कांग्रेस कोइराला परिवारको विर्ता होइन, सामथ्र्य भए चुनाव लडेर नेतृत्व लिए हुन्छ’ डा. शेखरलाई चुनौति दिएका थिए । त्यो चुनौतिपछि डा. शेखर थप आक्रोसित भएका हुन् ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाजको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनमा सभापति देउवाले डा. शेखरप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए –‘पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ तर यहाँ दुश्मनी हुन थालिसक्यो । बोलचाल नै बन्द भइसक्यो, कांग्रेसले कांग्रेसलाई नै हराउने गरी अन्तर्घात भएपछि कहाँ चुनाव जित्न सकिन्छ ? गिरिजाबाबु, सुशील सभापति हुँदा चुइँक्क बोल्न नसक्नेहरु अहिले बोल्न पाएका छन् । कांग्रेसमा बल्ल प्रजातन्त्र आएको छ । एकअर्कालाई गाली गरेर केही हुन्न चुनाव जित्ने गरी काम गर्नुहोस् ।’
त्यसको भोलिपल्ट शनिबार चितवन–काठमाडौं सम्पर्क समितिले आयोजना गरेका कार्यक्रममा नेता डा. शेखरले सभापति देउवालाई जवाफ दिए । उनले भने– ‘सभापति देउवाका अभिव्याक्ति तथा गतिविधि राजनीतिक संस्कार र नैतिकता अनुसारका भएनन् । सभापति भएर गुट चलाउने ? अझै बोलचाल गर्ने वातावरण छैन भन्ने ? सभापतिले बनाउनुप¥यो नि बोलचाल गर्ने वातावरण । देउवाले पार्टीलाई तदर्थवादमा लैजाने कोशिस गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘चार जनाले तरुण दल हाँकिरहेका छन्, पूर्णता पाउन सकेको छैन, नेविसंघ नेतृत्वविहीन भएको महिनौं भइसक्यो । यसरी तदर्थवादमा भातृ संगठन र पार्टी चलाउन हुँदैन ।’
गाउँदेखि वडासम्म इकाइ नै नबनेको अवस्थामा कसलाई जागरुक बनाउन राष्ट्रिय जागरण अभियान चलाउने ? भनेर प्रश्न गर्दै कोइरालाले भने–‘ जागरण कसलाई चाहियो ? नेतृत्वलाई, हामीलाई कि तपाईंहरूलाई ? कोइरालाले कार्यकर्तालाई सोधे, ‘तपाईंहरू त यसै जागरुक हुनुहुन्छ । झगडा गरिराख्ने हामीलाई जागरण चाहिएको हो ?’
कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘जागरण अभियानका बेलामा पार्टी हितविपरीत कसैले बोले अनुशासन समितिमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउन भन्दै कानून व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसभित्र यस्तो काम लोकतन्त्र विरोधी हो ।
नेताका आलोचना नगर्ने हो भने कांग्रेस कस्तो लोकतन्त्र चाहन्छ ? गाउँमा गएर कम्युनिष्टको विरोध त गर्नु नै छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर हामी कांग्रेसीकै बीचमा बोलचाल हुन सकेन भने कसलाई जागरुक बनाउने ? पार्टीलाई तदर्थवादबाट बाहिर निकाल्न छिटो १४ औं महाधिवेशनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन । तर, नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको खडेरी परेको छ । वीपीका अनुयायी हुन भने सभापति देउवा आलोचनाबाट नभागुन । बीपीले एक पटक पत्रकारलाई बोलाएर मेराविरूद्ध लेख भन्नुभएको रहेछ । अहिले लेख्न त के बोल्यो भने पनि अनुशासनको कारबाही हुन्छ ।’
किन आक्रोसित भए डा शेखर ?
डा. शेखरले सभापति देउवाबाट आँफू माथि धेरै नै धोका भएको महसुस गरेका छन् । गत १३ औं महाधिबेशनमा डा. शेखर महामन्त्री पदमा चुनाव लड्ने तयारीमा थिए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा टिम नै बनाएर डा. शेखरले देशव्यापी अभियान चलाएका थिए । पौडेल सभापति र आफू महामन्त्रीमा चुनाव लड्ने घोषणाका साथ डा. शेखरअघि बढेका थिए । त्यो अभियानको आर्थिक चाँजोपाँजो पनि डा. शेखरले नै मिलाएका थिए ।
महाधिबेशन आउनुभन्दा करिव दुई महिनाअघि सभापति सुशील कोइरालाको अचानक निधन भयो । सभापति कोइरालाको निधनपछि देउवा इतर पक्षबाट सभापतिको उमेदवार सर्वसम्मत रुपमा पौडेल बने । तर उनले डा. शेखरसँगको पूर्वसहमति र सहकार्य तोड्दै महामन्त्रीका रुपमा आफ्नो टिममा डा. शशांक कोइरालालाई सामेल गराए । यो घटनापछि पौडेल र डा. शेखरको दुरी बढ्यो ।
दाउ पर्खेर बसेको देउवा पक्षले शेखरसँग गोप्य वार्ता अघि बढायो । तत्कालका लागि डा. शेखरले पौडेल प्यानलबाटै केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव लड्ने र जितेपछि पदाधिकारीमा मनोनयन गरिदिने आश्वासन देउवा पक्षले दियो । यो आश्वासनपछि डा. शेखरले भित्रभित्रै देउवालाई सघाए, देउवाले पनि भित्रभित्रै शेखरलाई सघाए । जसका कारण देउवाले पार्टी सभापतिमा चुनाव जिते, शेखरले पनि सर्वाधिक भोट ल्याएर केन्द्रीय सदस्य जिते । तर चुनाव जितिसकेपछि देउवाले शेखरलाई पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न असमर्थता जनाए । उनले भने– ‘तपाँइलाई पदाधिकारीमा ल्याउन सकिन, पार्टी सरकारमा जाँदैछ, रोजेको मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री पाउनु हुनेछ, ढुक्क हुनोस् ।’ देउवाको यो आश्वासनपछि डा. शेखर ढुक्क भए । ओली सरकार ढलेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।
प्रचण्ड सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री पाउनेमा डा. शेखर ढुक्क थिए । देउवाले सपथ ग्रहणका लागि तयार रहन भनेका पनि थिए । तर अन्तिम अवस्थामा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र सभापति देउवाको गोप्य भेटवार्ता भयो । यो भेटवार्तापछि डा. शेखरको नाम काटियो । दौरा सुरुवाल लगाएर ठीक परेका शेखर कोइरालाले देउवाबाट ठूलो धोका पाए । न पौडेल पक्षले विश्वास गर्ने न त देउवाले पूर्व सहमति पालना गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि डा. शेखर आक्रोसित बनेका हुन । समाचार स्रोतका अनुसार सभापति देउवासँग त डा. शेखरको बोलचाल समेत बन्द भइसकेको छ ।
२०७६ साल जेठ ८ गते
इरान अमेरिका युद्धले तेलको भाउ प्रति ब्यारल २५० अमेरिकी डलर पुग्ने
युवकले बिहे अगाडी गरे आत्महत्या
जतिसुकै निष्पक्ष र व्यबसायीक पत्रकारिताको वकालत गरे पनि कथित ‘बरिष्ठ पत्रकार’ हरु...
व्यापार घाटा २७ .१ % बढ्यो, शोधान्तर स्थिति ४९ अर्ब घाटामा
चालू आर्थिक वर्षको सात महीनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि...
बामदेवको ब्यायाम : फुर्सद कि स्वास्थ्यप्रति सचेत ?
२०६५ सालमा गृहमन्त्री हुँदा मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई आकस्मिक रूपमा नर्भिक अस्पतालमा...